Deg-Deg: Qarax goordhow ka dhacay Agagaarka Wasaaradda Dhalinyaradda iyo Isboortiga ee somaliya . – WARSOOR
Deg-Deg: Qarax goordhow ka dhacay Agagaarka Wasaaradda Dhalinyaradda iyo Isboortiga ee somaliya .
Muqdisho-( warsoor)- Wararka imika na soo gaadhay ayaa sheegaya in goor dhaw uu qarax ka dhacay agagaarka Wasaaraddaha Dhalinyaradda iyo Isboortiga iyo Amniga.
Lama oga qasaaraha Rasmiga ah ee ka dhashay Qaraxa waxaa lasoo sheegayaa in uu ka dhacay Maqaayada ku taal kasoo horjeedka wasaaradda Dhalinyaradda iyo Isboortiga oo kutaala in u dhaxeysa Taalada Dal Jirka Dhasoon iyo Hotel Jubba .
Maqaayada la qarxiyay ayaa kutaala dhinaca Degmada Boondheere waxaana dhawaan laga furay halkaasi, waxaana wararka soo baxaya sheegayaan in maqaayada ay dad badan joogeen xiliga uu qaraxu ka dhacayay.
Wixii kusoo Kordho Wararka Qarax Dib ayaan idinkaga Soo gudbin doonaa warkaas oo faahfaahsan .
Murashaxa Xisbiga WADDANI Iyo Waftigii Uu Hoggaaminaayay Oo Kulamo La Yeeshay Wasaarada Arrimaha Dibadda Sweden & Hay-adda Mucaawinooyinka Ee SIDA
Kulan Dib-u-eegis Looggu Sameynaayey Barnaamijka Ololaha Doorashada Madaxtooyada ee WADDANI oo Maanta Lagu Soo Gebo-gabeeyey Hargeysa